कार्यकक्षमै गएर वडाअध्यक्षलाई रामधु,लाई गरे बाबुछोराले ! – सजल सन्देश
कार्यकक्षमै गएर वडाअध्यक्षलाई रामधु,लाई गरे बाबुछोराले !
By Sajal sandesh	 On२३ पुष २०७६, बुधबार ०२:५६
कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-११ का वडा अध्यक्ष दिलबहादुर बुढामाथि मंगलबार हात पा त भएको छ। छाडा गाईगोरु व्यवस्थापनको खर्चबारे विवाद हुँदा बुढामाथि कु ट पि ट गरेको वडा कार्यालयका कर्मचारीले बताए। वडा कार्यालयमा रहेका वडा अध्यक्ष बुढामाथि अग्नि विष्ट र उनका छोरा लोकेन्द्र विष्टले कु ट पि ट गरेका हुन् ।
२०७४ सालमा १५ दिनका लागि विष्टलाई नगरपालिकाले छाडा गाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो। गाई जिम्म दिएबापत विष्टलाई नगरपालिको दुई लाख ६० हजार रकम भुक्तानी गरेको थियो। गाई व्यवस्थापनको अझै दुई लाख रुपैयाँ रकम बाँकी रहेको भन्दै म दि रा सेवन गरी बुवाछोराले वि,वाद गरी कु ट पि ट गरेको वडा अध्यक्ष बुढाले बताए। ‘सम्झौताभन्दा बढी रकम विष्टले बुझेर लगेका छन्’ अध्यक्ष बुढाले भने, ‘भुक्तानी पाइसके पनि छाडा गाई व्यवस्थापनमा खटिएका कामदारलाई रकम नदिई खर्च गरेका छन्। उल्टै अझै रकम पाउनु पर्ने भनी बखेडा झिकेर कु ट पि ट मा उत्रिए।’
‘रकम भुक्तानीबारे नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ। त्यहि गएर बुझ्नोस्, पाउनु पर्ने भए नगरपालिको देला पनि भनेँ। तर गालीगलौज गर्दै ममाथि नै कु ट पि ट गरे’ उनले थपे। नगरपालिकका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले कार्य कक्षमै रहेका जनप्रतिनिधिमाथि कु ट पि ट गर्ने कार्य कदापी पनि सैह्य नहुने बताए। ‘पाउनु पर्ने रकम भए पनि नगरपालिकासँग बुझे हुन्थ्यो’, उनले भने ‘म दि रा से वन गरेर जनताको सेवामा खटिएका जनप्रतिनिधिमाथि कु ट पि ट गर्नेहरूमाथि कानुनी कार्वाही हुन्छ।’ वडा अध्यक्ष बुढालाई कु ट पि ट गर्ने बुवाछोरा दुवैलाई इलाका प्रहरी कार्यालय झलारीले प,क्राउ गरेको छ।
अस्ट्रेलियाले १० हजार ऊँट मार्दै